သာလျှင် Stochastic - MT4 အညွှန်းကိန်းများ
နေအိမ် MT4 အညွှန်းကိန်းများ သာလျှင် Stochastic
မေ 25, 2018
stochastic သုံးပြီးမီးမောင်းထိုးပြထားသည်ကုန်သွယ်မှု entry ကိုနှင့်ထွက်ပေါက်အချက်များ.
အဆိုပါညွှန်ကိန်းအလားအလာ entry ကိုမှတ်ဆုံးဖြတ်ရန်သုံး Stochastic ညွှန်ပြချက်ကနေဒေတာတွေကိုကိုအသုံးပြုသည်:
နှေးနှေး (default အကာလဖြစ်ပါသည် 700);
အလယ်အလတ် (default အကာလဖြစ်ပါသည် 120);
လျင်မြန်စွာ (default အကာလဖြစ်ပါသည် 30).
အဆိုပါအချက်ပြမှု (တစ်ဦးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့မြှားဇယားအပေါ်ရေးဆွဲနေသည်) အားလုံးသုံးညွှန်းကိန်းတစ်ချိန်တည်းမှာ overbought / oversold ဒေသများရှိသည့်အခါထုတ်ပေးနေသည်. နှေးကွေးများအတွက်ဒေသများ၏အရွယ်အစား, အလတ်စားနှင့်အစာရှောင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ် (ပုံမှန်အားဖြင့်): 10; 10;5လိုအပ်သလို. သောကွောငျ့ဖွစျသညျ, ၏ဧရိယာအရွယ်အစားမှာ 10, အဆိုပါ Stochastic ၏တန်ဖိုးသည်ထက် သာ. ကြီးမြတ်သည်ဆိုပါကညွှန်ပြနေတဲ့ရောင်း signal ကိုထုတ်ပေး 90, signal ကိုဝယ်လို့ - ထက်နည်းလျှင် 10.
Stochastic သာလျှင်တစ်ဦး Metatrader ဖြစ်ပါသည်4(MT4) အညွှန်းကိန်းများနှင့် Forex ညွှန်ပြချက်၏အနှစ်သာရမှာစုဆောင်းသမိုင်းဒေတာအဖြစ်အသွင်ပြောင်းဖို့ဖြစ်တယ်.
Stochastic သာအဝတ်အချည်းစည်းမျက်စိမှမမြင်ရတဲ့သောစျေးနှုန်းဒိုင်းနမစ်အတွက်အမျိုးမျိုးသောပိုင်ထိုက်သောနှင့်ပုံစံများကို detect လုပ်ဖို့အခွင့်အလမ်းများအတွက်ထောက်ပံ့.
Stochastic Only.mq4 install လုပ်နည်း?
Stochastic Only.mq4 Download
သင့်ရဲ့ Metatrader Directory ကိုမှ Stochastic Only.mq4 မိတ္တူ / ကျွမ်းကျင်သူများက / အညွှန်းကိန်းများ /
Stochastic Only.mq4 ပေါ်မှာ Right click နှိပ်ပြီး
indicator Stochastic Only.mq4 သင့်ရဲ့ဇယားအပေါ်ရရှိနိုင်ပါသည်
သင့်ရဲ့ Metatrader ထံမှ Stochastic Only.mq4 ဖယ်ရှားပစ်ရန်ကဘယ်လို4ဇယား?
ယခင်ဆောင်းပါးအစွမ်းသတ္တိ Indicator bounce 2.0 တန်ဂိုလိုင်းနှင့်အတူ
Next ကိုဆောင်းပါးAroon လှို